HTC U11 Ndụ: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
HTC enwebeghị afọ dị mfe. Companylọ ọrụ Taiwanese ahụla nkewa ekwentị na-emechaghị ịrị elu. N'agbanyeghị agbanye ekwentị zuru oke ma na-atọ ụtọ, ahịa anaghị akwụsị iso ya. Ihe kpatara Millionaires tụfuru. N'agbanyeghị nke ahụ, ha na-aga n'ihu na-eweta ụdị ọhụrụ. Dị ka nke a Ndụ U11 HTC.
Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ ọhụrụ n'etiti-nso. Ekwentị nwere ngwa nri niile ga - amasị gị nke ukwuu. Na mgbakwunye, ọ bụ Gam akporo Otu ekwentị, nke ahụ bụ, ụdị gam akporo dị ọcha. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya na HTC U11 Life a?
N'ezie anyị nwere ike ịsị na ọ bụ n'etiti ụzọ nso-ụzọ. Ọ bụ ekwentị dị ike nke ezubere iji zoo n'ahịa. Ọzọkwa inye nnukwu ọrụ na ndị ọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, abịa na gam akporo Oreo dị ka ọkọlọtọ. Anyị na-agwa gị banyere nkọwa ya n'okpuru.
1 Nkọwapụta HTC U11 Ndụ
2 Ọnụahịa ma malite HTC U11 Life
Nkọwapụta HTC U11 Ndụ
Ekwentị nwere a 5,2-anụ ọhịa Super LCD ihuenyo na Full HD mkpebi 1.920 x 1.080 pikselụ. E wezụga nke ahụ pixel njupụta kwa inch bụ 423,64. Onu ogugu adighi nma maka igwe di n'etiti. N'izugbe, ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ na-eme ka ị nwee mmetụta dị mma.
N'ime anyị na-ahụ a Snapdragon 630 processor. A ga-enwe nsụgharị abụọ dị nke a HTC U11 Life, nke dị iche na usoro nke RAM na ebe nchekwa dị n'ime. Nke mbụ nke nsụgharị nwere 3 GB nke Ram na 32 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Mgbe nke abụọ nwere 4 GB nke Ram na 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Ndị ọrụ ga - ahọrọ nke ga - adịrị ha mma. Na mgbakwunye, ebe nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 2 TB site na kaadị microSD.
HTC achọghị ịda mba na ngalaba foto. Ma Igwefoto n'ihu na azụ bụ megapixels 16. Na mgbakwunye, igwefoto azụ nwere ike ndekọ 4K vidiyo na ọdịyo dị elu. Mgbe inwere n'ihu igwefoto ị nwere ike ịdekọ vidiyo na FullHD.
La batrị nke HTC U11 Life o nwere ike imechu ọtụtụ ndị ihu. Nwere a 2.670 mAh batrị, nke nwere ike iyi ihe ezughi oke maka ekwentị nke njirimara ndị a. Dị ka ndị ọzọ na nkọwa ndị ọzọ, anyị ga-mata IP67 asambodo megide mmiri na ájá.
Ọnụahịa ma malite HTC U11 Life
El ndoputa oge mepere ụnyaahụ Nọvemba 2 na UK. Onwebeghị ihe ekwenyela banyere mbata ya na ahịa ndị ọzọ. A maghịkwa ụbọchị ịbata Spen, n'ezie anyị amaghị ma ọ ga-ebido. Anyị ga-echere nkwenye site na HTC.
Banyere ọnụahịa, mgbanwe ahụ ga-enwe ọnụahịa nke euro 369. Ihe nwere ike igwu egwu dị ukwuu megide ya, ebe ọ bụ na maka ekwentị dị n'etiti (ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mma), ọ nwere ike pụta bụrụ ihe dị oke ọnụ. Kedu ihe ị chere banyere ngwaọrụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC U11 Ndụ: Nkọwa nke oke etiti dị ike
Azụmaahịa ama na ọnụahịa dị ịtụnanya na Banggood